Xisbiga Oromada oo Shir ku Qabtay Magaalada Jijiga – Rasaasa News
Xisbiga Oromada oo Shir ku Qabtay Magaalada Jijiga
Taageerayaasha xisbiga talada haya ee degaanka Oromada, ayaa kulan balaadhan ku qabtay magaalada Jijiga xarunta degaanka Somalida. Kulanka oo lagu qabtay hoolka shirarka ee Sayyid Maxamed Cabdile Xasan, waxaa buux dhaafiyey dadka taageera xisbiga Oromada, kuwaas oo si lixaad leh u degan magaalada Jijiga.
Kulanka waxaa ka qaybgalay qaybha uu ka kooban yahay shacabka Oromada ee degan Jijiga. Dhanka Somalida waxaa ka qayb galay gudoomiyaha Jaamacada Jijiga, ku xigeenkiisa iyo arday aad u badan oo ka yimid degaanka Oromada dhigatana Jaamacada Jijiga.
Waa markii 4aad ee shacabka qoomiyada Oromadu ay shir ku qabtaan magaalada Jijiga, iyaga oo matalaya qoomiyada iyo dawlada degaanka Oromada.
Qoomiyada Oromada ayaa si lixaad leh u degan degmada Jijiga iyo degaanada ku dhaw dhaw, waxayna ku leeyihiin ganacsiyo xoog leh sida Bunuukta, Caymiska iyo shirkado.
Banka Horumarinta Oromiya ee ku yaal Jijiga, ayaa qayb ka ah fidida qoomiyada Oromada, isaga oo u fududeeya degitaanka Oromada degaanka Somalida. Oromiya Banka, ayaa bixiya daymo ay dadka Oromada ah ku bilowdaan bayacmushtar iyo dhismaha guryo ay dib u kireeyaan.
Qoomiyada Oromada oo ah qoomiyad aad u tiro badan, ayeyna ardayda u baan waxbarashada Jaamacadeed qaadi karin Jaamacadaha ka jira degaanka Oromada, waxay fursad u helaan in ay galaan Jaamacda Jijiga, tirada ardayda dhigata 40% waxay ka yimaadaan qoomiyada degaanka Oromada.
Shaqooyinka baahida joogtada ah leh ee ka jira magaalada Jijiga, ayaa soo jiita dadka Oromada. Shaqooyinkaas oo ay si xoog leh uga shaqeeyaan dadka Oromada sida; dhismaha guryaha, adeega biyaha iyo xamaalka, gadidda khudrada, ka ganacsiga noocyada dukaamada, gaadiidka iyo ka adeega guryaha. Hawlahaas adeega magaalada ee ay dadka Oromadu hayaan ayaa ah 75% Jijiga, inta soo hadha, waxaa qabta qoomiyada Somalida iyo Axmaarada.
Waana sababta keenta in qoomiyada Oramadu ay shirar ugu qabsadaan magaalada Jijiga ee degaanka Somalida.
Oromada iyo Somalida oo ah, labada qoomiyadood ee isugu dhaqan dhaw Ethiopia, waxay wadaagaan xad, kaas oo ay ka dhacaan dagaalo soo noqnoda iyo waliba is riixad xaga degaanka ah.
120 degaan oo isugui jira qabaleeyo iyo tuulooyin, ay hore isugu haysan jireen Somalida iyo Oromada, waxaa sanadkii 2004 qalinka ku duugay in ay Ormo qaadato Cabdi Jibriil, oo ahaa madaxwatynihii degaanka Somalida ee xiligaas. Qaar ka mid degmooyinkaas haatan waxay doonaya in la siiyo fursad ay ku cadeeyaan qoomiyada ay yihiin.
RW Shirdon oo Markii Ugu Horaysay Dalka Somaliya Dibada Uga Baxa
Duuliye Sare Asli Xasan Cabaade [Calansida] oo Ilmo Kaga Soo Degatay Garoonka Diyaaradaha Garaad Wiilwaal.